DHEGEYSO-Puntland oo kahadashay dhilalkii Caabudwaaq iyo eedayntii loojeediyey. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Puntland oo kahadashay dhilalkii Caabudwaaq iyo eedayntii loojeediyey.
Seteembar 8, 2016 3:33 b 0
Garoowe, Sep 08 2016–Dowladda Puntland ayaa si kulul uga jawaabtay hadal dhowaan kasoo yeeray maamulka degmada Caabudwaaq ee Galmudug oo salka kuhayey in Puntland iyo DDSI ay ka dambeeyeen shaqaaqooyinkii xalay kadhacay Magaalada Caabudwaaq.
Wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka gobolada dowladda Puntland Bashiir Cabdiraxmaan Xaaji Gurxan oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garoowe, ayaa hadalkaasi kutilmaamay mid aan laga fiirsan uuna sheegay shaqsi aan mas’uuliyad u qalmin oo colaad hurinaya.
Wasiirka ayaa waxa uu sidoo kale ugu baaqay mas’uuliyiinta maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee DDSI in aysan hadalkaasi dartiis u joojin gacan qabashadoodii bulshada gobolka Galgaduud.
Ugu dambayntiina wasiirka ayaa kahadlay colaadda kajirta qaybo kamid ah gobolka Mudug wuxuuna ugu baaqay maamulka Galmudug inuusan colaad hurin arrintaasina xalkeeda u daayo odayaasha dhaqanka dadka reer miyiga ah ee xiisaddu kadhex dhacday.
Gudiga doorashada dadban oo war qoraal ah ugudbiyey shirka madasha.